एप्पल पोडकास्टहरू त्यति राम्रो छैनन् जति कम्पनीले हामीलाई विश्वास गरेको चाहन्छ | म म्याक बाट हुँ
एप्पल पोडकास्टहरू कम्पनीले हामीलाई विश्वास गरेको जस्तो राम्रो छैन
के तपाईंलाई थाहा छ कि एप्पलको पोडकास्ट सुन्नको लागि आफ्नै अनुप्रयोग छ?। तपाईंलाई सायद यो थाहा थियो र यदि तपाईं यस प्रकारको कर्ण मनोरञ्जन सुन्नेहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, Apple अनुप्रयोग प्रयोग नगर्नुहोस्। यसको समीक्षा सधैं धेरै कम भएको छ। बिन्दुमा कि कम्पनीले यसलाई नवीकरण गर्न र सुधारहरू गर्नुपर्‍यो, तर अझै पनि प्रयोगकर्ताहरूको यसको बारेमा राम्रो राय छैन। यद्यपि, एक महिना भन्दा कमको लागि, यस्तो देखिन्छ कि समीक्षाहरू परिवर्तन भएको छ, तर कुनै गल्ती नगर्नुहोस्, एप सुधारिएको छैन।
जब तपाइँ एप स्टोरबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तपाइँ यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, पाँच ताराहरू (एउटाबाट) र टिप्पणी छोडेर। यसले विकासकर्ताहरूलाई अनुप्रयोगलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ वा तिनीहरू सही ट्र्याकमा छन् भनेर संकेत गर्दछ। तर यो समान अनुप्रयोगहरू खोजिरहेका र अरूको राय द्वारा निर्देशित प्रयोगकर्ताहरूको लागि पनि उपयोगी छ। एप्पलको पोडकास्ट एपमा १.८ ताराहरू थिए। पटक्कै राम्रो छैन। यद्यपि, एक महिना भन्दा कम समयको लागि, यसले 1.8 तारा रेटिङ प्राप्त गरेको छ। तर यति मात्र होइन, यो लगभग 1000 समीक्षा भएकोबाट 18.000 भन्दा बढी भएको छ। किन?
कारण स्पष्ट रूपमा यो हो कि जब प्रयोगकर्ताले यस एप मार्फत पोडकास्टहरू सुन्छन्, उनीहरूले सुनेका कुराहरू योग्य हुन चेतावनी पाउँछन्। जाहिर छ, तिनीहरू लगभग सधैं सकारात्मक भोटहरू छन् किनभने यो प्रयोगकर्ता हो जसले के सुन्न रोजेको छ। यदि म रानीलाई मन पराउँछु र रानीलाई रोज्छु भने, मैले राम्ररी सुनेको कुराको कदर गर्नेछु, किनकि त्यस्तै कुरा हुन्छ। यी मूल्याङ्कनहरू एपको मूल्याङ्कनमा देखाइएका देखिन्छन्। त्यसैले यो अनजानमा वा स्वेच्छाले थाहा नहुन सक्छ, अमेरिकी कम्पनीले एप्लिकेसनको मूल्याङ्कन बढाइरहेको छ जसले धेरै वांछित हुन छोड्छ।
पोडकास्टहरू सुन्न अन्य अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दा यो हुँदैन जस्तो देखिन्छ। सबै धेरै अनौठो, हैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक प्रोग्रामहरू » म्याक अनुप्रयोग स्टोर » एप्पल पोडकास्टहरू कम्पनीले हामीलाई विश्वास गरेको जस्तो राम्रो छैन
एप्पल फेरि सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनीको नम्बर १ मा पुग्यो
डकुमेन्ट्री द लाइन जोखिम नलिनुको लागि यसको प्रिमियरमा निराश हुन्छ